Ciidamada Booliiska ee degmada Cabudwaaq oo gacanta ku dhigay gacan ku dhiiglayaal | shabakada banaadir24 online
banaadir24 news Ciidamada Amaanka dowladda Soomaaliya ee ka howlgala degmada Cabuudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa howlgal xagga amaanka ah oo ay ka sameeyeen degmadasi ku soo qabtay gacan ku dhiiglayaal dilal ka soo geystey agagaarka degmada Galaaddi ee maamulka Ethiopia.
Taliyaha Amniga ee maamulka degmada Cabuudwaaq Axmed Muuse Cismaan Ayaa Radio Muqdisho u sheegay in howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen degmada Cabuudwaaq lagu soo qabqabtay Shan nin oo gacan ku dhiiglayaal ah oo 22 kii bishan deegaanka Galaaddi ee ismaamulka Soomaalida dad rayid ah ku soo dilay.
Sidoo kale taliyaha ayaa intaa ku daray in gacan ku dhiiglayaashan gacanta lagu dhigay ay wateen Sadex Qori iyo Laba Tooreey, waxaana ka mid ahaa dadka ay soo dileen Isamo iyo waxgarad magac iyo maamuusba ku lahaa bulshada.
Dhanka kale saraakiisha caafimaadka ee degmada Cabuudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa xaqiijiyey iney jiraan kiisas xanuunno ah oo mallaariyadu ku jirto kana dhashay daadad ku soo rogmadey dhowaan degmadasi.
Dr. C/llaahi Faarax Jaamac oo ka mid ah dhaqaatiirka ka howlgasha cisbitalka guud ee degmadaasi ayaa Radio Muqdisho u sheegay in bukaanada ugu daran ee soo gaara cisbitalka ay yihiin kuwa qaba cudurka duumada ama mallaariyada.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu hoosta ka xariiqay in koroka cudurkaasi loo aaneyn karo daadkii dhawaan kusoo rogmaday magaaladaasi iyo biyaha wali dhexfadhiya degmada cabuudwaaq.
« Munaasabad dib loogu howl galinayo wakaladaha howlaha marakiibta iyo gaadiidka badda iyo wakaalada dekadaha soomaaliyeed ayaa waxaa maanta lagu qabtay muqdisho.